ubusazi: iselfowuni yokuqala yaqala ukuthengiswa eunited States ngo-1983
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Ubusazi: iselfowuni yokuqala yaqala ukuthengiswa eMelika ngo-1983
Ubusazi: iselfowuni yokuqala yaqala ukuthengiswa eMelika ngo-1983
Oonomyayi! Kubonakala ngathi bebesoloko bekhona, kodwa jonga ngokukhawuleza emva kwexesha kwaye uyakubona ukuba kwiminyaka nje engama-30 okanye eyadlulayo, kwakungekho selula iyasetyenziswa. Abantu babedibana njani ngelo xesha?
Yiza uzokucinga ngayo, kukho isizathu sokuba kusekho amawaka eefowuni eMelika, kwaye emva koko yayixabisa iipeni ezimbalwa ukwenza umnxeba, ngenxa yoko kwakungekho nzima ukwenza umnxeba xa ngokwenene ndiyidinga.
Iifowuni zemoto nazo bezikho ukusukela phakathi kwiminyaka yoo-1940, kodwa ezo bezigcinelwe iindawo ezizizityebi zabemi.
‘AMANQAKU ANGUMILINGANISELO KUPHELA 30’
Into enomdla kukuba, iselfowuni yokuqala ethengiswayo yathengisa ityala kwiminyaka engama-32 eyadlulayo nge-13 ka-Matshi ka-1984. Esi sixhobo yayiyi-Motorola DynaTAC 8000X, ifowuni ephethwe ngesandla enexabiso elingama- $ 3,995 exabiso ($ 9,000 yexabiso lokuhlengahlengiswa kwamaxabiso ngo-2014).
Ukuba u & apos; uyazibuza ukuba kutheni ukusasazeka kweeselfowuni kuthathe ixesha elide ukusukela ngoko, ixabiso sisizathu sakho sokuqala, kuba ezo zixhobo zazibiza kakhulu. I-DynaTAC 8000X yayingengobunzima bokukhanya ncam-yanciphisa isikali phantse kwii-ounces ezingama-30 (1.875lbs). Ngapha koko, i8000X yayinkulu kakhulu kwaye inzima kangangokuba nabayili bayo bayinike igama lesidlaliso elithi 'Isitena.'
Inkulu kwaye inzima, yayibizwa ngegama 'iBrick'
Enye into enomdla malunga nefowuni yokuqala ethengiswayo yeyokuba yeza emva kweminyaka eli-10 emva kokuba umyili wefowuni uMartin Cooper efowunele okokuqala ngo-1973. Jonga kwiintengiso ezimalunga nayo kwaye usazise ukuba ubuza kuvakalelwa njani ukusebenzisa iifowuni ezinjalo namhlanje.
moto z uthenge enye
I-Nexus 6 kwi-AT & T kuthiwa iqala ukufumana uhlaziyo lwe-Android 5.1 Lollipop
Ezona meko zintle zeGoogle Pixel 2 kunye nePixel 2 XL: Khusela into oyithandayo
Dlala imidlalo yePS3 kwisixhobo sakho se-iOS